ပရိတ်ကြိုး ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ဝင်ပူး တဲ့ ကမ္ဘာအေး က ဒေါ်အေးသင် | CeleTrend
ဒီတစ်ခါတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် သြဂုတ်လ ( ၅ ) ရက်နေ့က ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ် ။ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတရုံရှိတယ်။ စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေ နေထိုင်ဖို့ အတွက်စက်ရုံရဲ့အနောက်ဖက်မှာတင် တန်းလျားလေးတခု ဆောက်ထား ပေးတယ် ။ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့လရဲ့ ပထမဆုံး တနင်္လာနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတခု စတင်ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ။ အထည်ချုပ်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးချာတိတ်မလေးတယောက်က သူ့လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားတဲ့ပရိတ်ကြိုးကို အလုပ်လုပ်ရင်း တန်းလန်းကနေ ဆွဲပြီးဖြုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ကြိုးစားနေတာကို စက်ရုံထဲမှာ လိုက်ကြည့်နေတဲ့
စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီက သတိထားမိလိုက်တယ်။ အစပိုင်းတော့ မသိသလိုနေလိုက်မိပေမယ့် ခလေးမလေး သူ့လည်ပင်းက ပရိတ်ကြိုးကိုဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ အကြိမ်ရေအတော်များလာတော့ စက်ရုံပိုင်ရှင်လည်း မနေနိုင်တော့ပဲ “နင် .. အလုပ်မလုပ်ပဲ ဒါဘာလုပ်နေတာလဲ ??” ဆိုပြီး သွားမေးတော့တာပါပဲ။ ခါတိုင်းဆိုရင် ကလေးမလေးက စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီကြီးကို တရိုတသေဆက်ဆံတတ်ပေမယ့်ဒီတကြိမ်မှာတော့ မျက်နှာကိုတောင် မကြည့်တော့ပဲ ” ဒါကြီးက ရှုပ်လို့ မကြိုက်ဘူး ” ဆိုပြီး လေသံခပ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်ရင်းသူ့လည်ပင်းက ပရိတ်ကြိုးကို သဲသဲမဲမဲဆွဲဖြုတ်နေပါတော့တယ်။
အရင်နေ့တွေတုန်းကဆိုရင် သီချင်းလေးတအေးအေးဆိုလိုက်၊ ဘေးနားမှာ အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စကားတွေရွှန်းရွှန်းနေအောင်ပြောလိုက်နဲ့ နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးက ဒီနေ့မှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောပဲ သူ့လည်ပင်းက ပရိတ်ကြိုးနဲ့တင် အတော်အလုပ်ရှုပ်နေတော့တာပဲ။ ချာတိတ်မလေးရဲ့အခြေအနေကို တနေရာကနေတွေ့လိုက်ရတဲ့ စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီရဲ့သားကဒါသွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာပြီး သူတို့ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်က ပရိတ်ရည်ကိုယူလာပြီး ချာတိတ်မကို
သောက်ခိုင်းပါလေရော။ ပရိတ်ရည်သောက်ခိုင်းတော့မှ အခြေအနေက ပိုပြီးရှုပ်ထွေးသွားတယ် ပြောရမလားပဲ။ ကောင်မလေးရဲ့ ပင်ကိုအသံမဟုတ်တော့ပဲ အသက်အရွယ်အိုမင်းနေတဲ့ မိန်းမကြီးတယောက်ရဲ့ အသံ၊ လေယူလေသိမ်းနဲ့ ” ငါ မသောက်ချင်ဘူး ” လို့ယတိပြတ်ငြင်းပါတော့တယ်။ခလေးမရဲ့လည်ပင်းက ပရိတ်ကြိုးကလည်း ကျွတ်သွားပြီး သူ့ရှေ့က စက်ချုပ်ခုံပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ ချာတိတ်မက သူ့ထက်အသက်အများကြီး ကြီးတဲ့စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီ့ကို ” ငါ ဗိုက်ဆာတယ်။ ထမင်းခူးကျွေးစမ်း ” ဆိုပြီး ပြောလာပါရော။ စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီခမျာလည်း ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ သူ့အိမ်က အိမ်ဖော်အလုပ်သမားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး ကောင်မလေးအတွက် ထမင်းသွားခူးပြီးယူလာပေးဖို့ မှာလိုက်တယ်။ ထမင်းဟင်းတွေရောက်လာတော့ ကောင်မလေး ခါတိုင်းအရင်နေ့တွေစားနေကျပမာဏထက်ကိုပိုပြီး စားနေလိုက်တာ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် တခါမှ ထမင်းဟင်းမမြင်ဘူးတဲ့ အငတ်တယောက်အတိုင်းပါပဲ။ ထမင်းစားနေရင်းက စက်ရုံပိုင်ရှင်ကို ” ငါ့ကို ရေခပ်ပေးစမ်း ” လို့ ပြောလာပြန်ပါရော။
တကယ်ဆိုရင် ခလေးမလေးက ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်သလို တခါမှလည်း ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ ငါဆိုတဲ့နာမ်စားကို သုံးပြီး ပြောလေ့ပြောထလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကောင်မလေး ထမင်းစားပြီးတော့မှ စက်ရုံပိုင်ရှင်လည်း ကြောက်စိတ်ကိုအားတင်းပြီး ” နင်က ဘယ်ကလဲ??? ဘယ်သူလဲ??? ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ??? ” ဆိုပြီး အင်တာဗျူးလုပ်ရပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီလိုမေးတော့ ဟိုကလည်းအမယ်အိုကြီးတယောက်ရဲ့ ခက်ထန်တဲ့လေသံနဲ့….. ” ငါက ဒေါ်အေးသင်။ ဒီအိမ်က ငါ့အိမ် ဟဲ့။ နင်တို့ က လူတွေကလည်းများတယ်။ ငါမနေတတ်တော့ဘူး။ ခုချက်ချင်း အကုန်ထွက်သွားကြ။ ငါ့အိမ် ငါ့ကို ပြန်ပေး ။ ” ဆိုပြီးတော့ ပြန်ပြောတော့တာပါပဲ။
စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီကလည်း သူ့ထမင်းအိုးကို တုတ်နဲ့ထိုးတာတော့ ဘယ်ခံနိုင်ပါလိမ့်မတုန်း။ ပြန်ပြောတော့တာပါပေါ့။ ” ရှင် အဲဒီလိုတော့ မပြောနဲ့လေ။ ဒီအိမ်က ကျွန်မတို့နေနေတာ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဖယ်ပေးလို့ ဖြစ်မလဲ ” ဆိုပြီး စောဒက တက်တော့တာပေါ့။ဒေါ်အေးသင်တဖြစ်လဲ ကောင်မလေးကလည်း စိတ်ကြီးတယ်။ ” မဖယ်လို့ မရဘူး။ နင်တို့အားလုံး ဒီနေရာကနေ ထွက်သွားကြ ” လို့ထပ်ပြောလာပါလေရော။ ဒီမှာတင် စက်ရုံပိုင်ရှင်လည်း ” ကောင်းပြီလေ။ ဒီလိုဆိုရင် ရှင်ကျွန်မတို့ကို နေရာရှာပေး။ ရှင် ကျွန်မတို့အတွက်နေရာရှာပေးရင် ကျွန်မတို့ ဒီအိမ်ကနေ ဖယ်ပေးမယ် ” ဆိုပြီးတော့ အပေးအယူလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှာ ဟိုတယောက်က” အေး ကောင်းပြီလေ။ ညည်းစကား ညည်း တည်ပစေ ” လို့ပြောပြီး ခဏငြိမ်သွားတယ်။
ချာတိတ်မလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အေးသင် ငြိမ်နေတုန်းမှာ အန်တီ့ခမျာ သူ့သမီးဆီကို အကျိုးအကြောင်းဖုန်းဆက်ပြီးဘုန်းကြီးတွေပင့်၊ ကမ္မဝါဖတ်ရင်ကောင်းမလားလို့ အကြံဉာဏ်တောင်းရပါတော့တယ်။ သူ့သမီးကလည်း ဖုန်းထဲက သူ့အမေပြောတာတွေကို နားထောင်ပြီးမှ ” အို အမေကလည်း… သူနဲ့အပေးအယူသွားလုပ် ပြီးမှ နှင်ချရင်ပိုသောင်းကျန်းမှာပေါ့ ” လို့ ပြန်ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ပဲဘာဆက်လုပ်လို့ လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိတော့ပဲ အချိန်တရက်ကုန်သွားပါလေရော။ ကောင်မလေးလည်း ဘာပြဿ နာတခုမှ ထပ်မဖြစ်တော့ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီလို့ပဲ ထင်နေကြတုန်းမှာ ညဘက်ရောက်တော့ နောက်ထပ်ပြဿနာတခု ထပ်ဖြစ်ပြန်ပါတော့တယ်။စက်ချုပ်အလုပ်သမားတွေထဲက အစအနောက်သန်တဲ့ ကောင်လေးတယောက်က အဲ့ဒီကောင်မလေးကို “ဟဲ့ !!! အေးသင်” လို့ လှမ်းခေါ်ပြီး နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကောင်လေးကို ပေစောင်းစောင်းကြည့်ပြီးတော့ ကပ်ကြေးနဲ့ထိုးဖို့ ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။ ကောင်မလေး
ကို အတင်းဝိုင်းချုပ်ပြီး ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့ကို ခေါ်သွားကြတော့ ဘုရားကန်တော့တယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားဆင်းတုတော်ကိုသူ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီး ချုံးပွဲချငိုပါတော့တယ်။အခြေအနေတွေက တမျိုးတဖုံဖြစ်လာတော့ စက်ရုံပိုင်ရှင်အန်တီကြီးလည်း ကြောက်စိတ်ကိုအားတင်းပြီးတော့ ” ရှင် ဒီနေရာမှာဒီအတိုင်းဆက်နေသွားလို့တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်ဘူး။ ရှင်ဆုံးတော့ ရှင့်အတွက် ဘုန်းကြီးပင့်၊ ဆွမ်းကပ်၊ အမျှဝေမလုပ်ပေးကြဘူးလား ” လို့ မေးတဲ့အခါမှာ ဟိုကလည်း ” ဆွမ်းကပ်တယ်။ သာဓုခေါ်လို့ မရဘူး ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ပြီးတော့ ငိုရတာမောသွားလို့လားမသိပါဘူး။ ခဏ ငြိမ်သွားပြန်တယ်။ သူငြိမ်နေတုန်းမှာ အန်တီ့ရဲ့သားက တရားခွေဖွင့်လိုက်တော့လည်း ငိုရင်းနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်လေးနားထောင်နေပြန်ရော။ ကောင်မလေးလည်း ဘာမှထပ်မသောင်းကျန်းတော့သလို ညည့်ကလည်းအတော်နက်နေပြီမို့ ဘေးနားမှာယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးတချို့ကို အစောင့်သဘောမျိုးစောင့်အိပ်ခိုင်းပြီး ဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်ကြတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ ဘုန်းကြီးတွေပင့်ပြီး တရားနာ၊ ကမ္မဝါညှပ်ပြီး ရေစက်ချ အမျှပေးဝေလိုက်တော့ ဘုန်းကြီးတွေကို ကန်တော့ပြီး
ကောင်မလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ ထွက်သွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ ကာယကံရှင်တွေအပြောအရတော့ ဝင်ပူးခံရတဲ့ကောင်မလေးက အရင်တုန်းကလို မဟုတ်တော့ပဲ အသားအရည် ဝင်းဝင်းဝါဝါနဲ့ မျက်နှာလည်း ဟိုးအရင်တုန်းကထက် ပိုပြီးတော့ ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်လာပါသတဲ့။ကိုယ်တိုင်ကြုံရခြင်းမဟုတ်လို့ စီကာပတ်ကုံးမရေးတတ်ပေမယ့် ဘိလပ်ပြည် လန်ဒန်က တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသဖခင်ရဲ့ကိုယ်တွေ့အကြောင်းအရာတွေကို နောက်တကြိမ်မှာ ပြောပြဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်။
ဒီတဈခါတော့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျ သွဂုတျလ ( ၅ ) ရကျနကေ့ ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတခုကို ပွနျပွောပွခငျြပါတယျ ။ရနျကုနျမွို့၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးပျေါမှာ အထညျခြုပျစကျရုံတရုံရှိတယျ။ စကျရုံဝနျထမျးတှေ နထေိုငျဖို့ အတှကျစကျရုံရဲ့အနောကျဖကျမှာတငျ တနျးလြားလေးတခု ဆောကျထား ပေးတယျ ။ကုနျလှနျခဲ့တဲ့လရဲ့ ပထမဆုံး တနင်ျလာနမှေ့ာတော့ အဲ့ဒီ အထညျခြုပျစကျရုံမှာ ခါတိုငျးနဲ့မတူတဲ့ အဖွဈအပကျြလေးတခု စတငျပျေါပေါကျလာတော့တာပါပဲ။ အထညျခြုပျဝနျထမျးတှထေဲမှာ အသကျအငယျဆုံးခြာတိတျမလေးတယောကျက သူ့လညျပငျးမှာ ဆှဲထားတဲ့ပရိတျကွိုးကို အလုပျလုပျရငျး တနျးလနျးကနေ ဆှဲပွီးဖွုတျဖို့အကွိမျကွိမျအခါခါ ကွိုးစားနတောကို စကျရုံထဲမှာ လိုကျကွညျ့နတေဲ့
စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီက သတိထားမိလိုကျတယျ။ အစပိုငျးတော့ မသိသလိုနလေိုကျမိပမေယျ့ ခလေးမလေး သူ့လညျပငျးက ပရိတျကွိုးကိုဖွုတျဖို့ ကွိုးစားနတော အကွိမျရအေတျောမြားလာတော့ စကျရုံပိုငျရှငျလညျး မနနေိုငျတော့ပဲ “နငျ .. အလုပျမလုပျပဲ ဒါဘာလုပျနတောလဲ ??” ဆိုပွီး သှားမေးတော့တာပါပဲ။ ခါတိုငျးဆိုရငျ ကလေးမလေးက စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီကွီးကို တရိုတသဆေကျဆံတတျပမေယျ့ဒီတကွိမျမှာတော့ မကျြနှာကိုတောငျ မကွညျ့တော့ပဲ ” ဒါကွီးက ရှုပျလို့ မကွိုကျဘူး ” ဆိုပွီး လသေံခပျပွတျပွတျနဲ့ ပွနျဖွလေိုကျရငျးသူ့လညျပငျးက ပရိတျကွိုးကို သဲသဲမဲမဲဆှဲဖွုတျနပေါတော့တယျ။
အရငျနတှေ့တေုနျးကဆိုရငျ သီခငျြးလေးတအေးအေးဆိုလိုကျ၊ ဘေးနားမှာ အတူအလုပျလုပျနတေဲ့ ဝနျထမျးတှနေဲ့ စကားတှရှေနျးရှနျးနအေောငျပွောလိုကျနဲ့ နတေတျတဲ့ ကောငျမလေးက ဒီနမှေ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဘယျသူနဲ့မှ စကားမပွောပဲ သူ့လညျပငျးက ပရိတျကွိုးနဲ့တငျ အတျောအလုပျရှုပျနတေော့တာပဲ။ ခြာတိတျမလေးရဲ့အခွအေနကေို တနရောကနတှေလေို့ကျရတဲ့ စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီရဲ့သားကဒါသှေးရိုးသားရိုးမဟုတျလောကျဘူးဆိုတဲ့အတှေးဝငျလာပွီး သူတို့ဘုရားကြောငျးဆောငျပျေါက ပရိတျရညျကိုယူလာပွီး ခြာတိတျမကို
သောကျခိုငျးပါလရေော။ ပရိတျရညျသောကျခိုငျးတော့မှ အခွအေနကေ ပိုပွီးရှုပျထှေးသှားတယျ ပွောရမလားပဲ။ ကောငျမလေးရဲ့ ပငျကိုအသံမဟုတျတော့ပဲ အသကျအရှယျအိုမငျးနတေဲ့ မိနျးမကွီးတယောကျရဲ့ အသံ၊ လယေူလသေိမျးနဲ့ ” ငါ မသောကျခငျြဘူး ” လို့ယတိပွတျငွငျးပါတော့တယျ။ခလေးမရဲ့လညျပငျးက ပရိတျကွိုးကလညျး ကြှတျသှားပွီး သူ့ရှကေ့ စကျခြုပျခုံပျေါပွုတျကသြှားတယျ။ ပွီးတော့ ခြာတိတျမက သူ့ထကျအသကျအမြားကွီး ကွီးတဲ့စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီ့ကို ” ငါ ဗိုကျဆာတယျ။ ထမငျးခူးကြှေးစမျး ” ဆိုပွီး ပွောလာပါရော။ စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီခမြာလညျး ဘာလုပျလို့လုပျရမှနျးမသိတာနဲ့ သူ့အိမျက အိမျဖျောအလုပျသမားတယောကျကိုလှမျးချေါပွီး ကောငျမလေးအတှကျ ထမငျးသှားခူးပွီးယူလာပေးဖို့ မှာလိုကျတယျ။ ထမငျးဟငျးတှရေောကျလာတော့ ကောငျမလေး ခါတိုငျးအရငျနတှေ့စေားနကေပြမာဏထကျကိုပိုပွီး စားနလေိုကျတာ ရိုငျးရိုငျးပွောရရငျ တခါမှ ထမငျးဟငျးမမွငျဘူးတဲ့ အငတျတယောကျအတိုငျးပါပဲ။ ထမငျးစားနရေငျးက စကျရုံပိုငျရှငျကို ” ငါ့ကို ရခေပျပေးစမျး ” လို့ ပွောလာပွနျပါရော။
တကယျဆိုရငျ ခလေးမလေးက ဒီအထညျခြုပျစကျရုံမှာ အသကျအငယျဆုံးဖွဈသလို တခါမှလညျး ဘယျသူ့ဘယျသူကိုမှ ငါဆိုတဲ့နာမျစားကို သုံးပွီး ပွောလပွေ့ောထလညျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကောငျမလေး ထမငျးစားပွီးတော့မှ စကျရုံပိုငျရှငျလညျး ကွောကျစိတျကိုအားတငျးပွီး ” နငျက ဘယျကလဲ??? ဘယျသူလဲ??? ဘာလို့ဒီလိုလုပျတာလဲ??? ” ဆိုပွီး အငျတာဗြူးလုပျရပါတော့တယျ။ အဲ့ဒီလိုမေးတော့ ဟိုကလညျးအမယျအိုကွီးတယောကျရဲ့ ခကျထနျတဲ့လသေံနဲ့….. ” ငါက ဒျေါအေးသငျ။ ဒီအိမျက ငါ့အိမျ ဟဲ့။ နငျတို့ က လူတှကေလညျးမြားတယျ။ ငါမနတေတျတော့ဘူး။ ခုခကျြခငျြး အကုနျထှကျသှားကွ။ ငါ့အိမျ ငါ့ကို ပွနျပေး ။ ” ဆိုပွီးတော့ ပွနျပွောတော့တာပါပဲ။
စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီကလညျး သူ့ထမငျးအိုးကို တုတျနဲ့ထိုးတာတော့ ဘယျခံနိုငျပါလိမျ့မတုနျး။ ပွနျပွောတော့တာပါပေါ့။ ” ရှငျ အဲဒီလိုတော့ မပွောနဲ့လေ။ ဒီအိမျက ကြှနျမတို့နနေတော။ ဘယျလိုလုပျပွီး ဖယျပေးလို့ ဖွဈမလဲ ” ဆိုပွီး စောဒက တကျတော့တာပေါ့။ဒျေါအေးသငျတဖွဈလဲ ကောငျမလေးကလညျး စိတျကွီးတယျ။ ” မဖယျလို့ မရဘူး။ နငျတို့အားလုံး ဒီနရောကနေ ထှကျသှားကွ ” လို့ထပျပွောလာပါလရေော။ ဒီမှာတငျ စကျရုံပိုငျရှငျလညျး ” ကောငျးပွီလေ။ ဒီလိုဆိုရငျ ရှငျကြှနျမတို့ကို နရောရှာပေး။ ရှငျ ကြှနျမတို့အတှကျနရောရှာပေးရငျ ကြှနျမတို့ ဒီအိမျကနေ ဖယျပေးမယျ ” ဆိုပွီးတော့ အပေးအယူလုပျကွညျ့လိုကျတယျ။ ဒီတော့မှာ ဟိုတယောကျက” အေး ကောငျးပွီလေ။ ညညျးစကား ညညျး တညျပစေ ” လို့ပွောပွီး ခဏငွိမျသှားတယျ။
ခြာတိတျမလေးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲရောကျနတေဲ့ ဒျေါအေးသငျ ငွိမျနတေုနျးမှာ အနျတီ့ခမြာ သူ့သမီးဆီကို အကြိုးအကွောငျးဖုနျးဆကျပွီးဘုနျးကွီးတှပေငျ့၊ ကမ်မဝါဖတျရငျကောငျးမလားလို့ အကွံဉာဏျတောငျးရပါတော့တယျ။ သူ့သမီးကလညျး ဖုနျးထဲက သူ့အမပွေောတာတှကေို နားထောငျပွီးမှ ” အို အမကေလညျး… သူနဲ့အပေးအယူသှားလုပျ ပွီးမှ နှငျခရြငျပိုသောငျးကနျြးမှာပေါ့ ” လို့ ပွနျပွောတယျ။ ဒါနဲ့ပဲဘာဆကျလုပျလို့ လုပျရကောငျးမှနျးမသိတော့ပဲ အခြိနျတရကျကုနျသှားပါလရေော။ ကောငျမလေးလညျး ဘာပွဿ နာတခုမှ ထပျမဖွဈတော့ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖွဈသှားပွီလို့ပဲ ထငျနကွေတုနျးမှာ ညဘကျရောကျတော့ နောကျထပျပွဿနာတခု ထပျဖွဈပွနျပါတော့တယျ။စကျခြုပျအလုပျသမားတှထေဲက အစအနောကျသနျတဲ့ ကောငျလေးတယောကျက အဲ့ဒီကောငျမလေးကို “ဟဲ့ !!! အေးသငျ” လို့ လှမျးချေါပွီး နောကျလိုကျတဲ့အခါမှာ ကောငျလေးကို ပစေောငျးစောငျးကွညျ့ပွီးတော့ ကပျကွေးနဲ့ထိုးဖို့ ကွိုးစားတော့တာပါပဲ။ ကောငျမလေး
ကို အတငျးဝိုငျးခြုပျပွီး ဘုရားကြောငျးဆောငျရှကေို့ ချေါသှားကွတော့ ဘုရားကနျတော့တယျ။ ပွီးတော့ ဘုရားဆငျးတုတျောကိုသူ့ခေါငျးပျေါမှာတငျပွီး ခြုံးပှဲခငြိုပါတော့တယျ။အခွအေနတှေကေ တမြိုးတဖုံဖွဈလာတော့ စကျရုံပိုငျရှငျအနျတီကွီးလညျး ကွောကျစိတျကိုအားတငျးပွီးတော့ ” ရှငျ ဒီနရောမှာဒီအတိုငျးဆကျနသှေားလို့တော့ ဘယျနညျးနဲ့မှ မဖွဈဘူး။ ရှငျဆုံးတော့ ရှငျ့အတှကျ ဘုနျးကွီးပငျ့၊ ဆှမျးကပျ၊ အမြှဝမေလုပျပေးကွဘူးလား ” လို့ မေးတဲ့အခါမှာ ဟိုကလညျး ” ဆှမျးကပျတယျ။ သာဓုချေါလို့ မရဘူး ” လို့ ပွနျဖွတေယျ။ ပွီးတော့ ငိုရတာမောသှားလို့လားမသိပါဘူး။ ခဏ ငွိမျသှားပွနျတယျ။ သူငွိမျနတေုနျးမှာ အနျတီ့ရဲ့သားက တရားခှဖှေငျ့လိုကျတော့လညျး ငိုရငျးနဲ့ ငွိမျငွိမျလေးနားထောငျနပွေနျရော။ ကောငျမလေးလညျး ဘာမှထပျမသောငျးကနျြးတော့သလို ညညျ့ကလညျးအတျောနကျနပွေီမို့ ဘေးနားမှာယောကျြားလေး၊ မိနျးကလေးတခြို့ကို အစောငျ့သဘောမြိုးစောငျ့အိပျခိုငျးပွီး ဒီတိုငျးထားခဲ့လိုကျကွတယျ။မနကျမိုးလငျးတော့ ဘုနျးကွီးတှပေငျ့ပွီး တရားနာ၊ ကမ်မဝါညှပျပွီး ရစေကျခြ အမြှပေးဝလေိုကျတော့ ဘုနျးကွီးတှကေို ကနျတော့ပွီး
ကောငျမလေးခန်ဓာကိုယျထဲကနေ ထှကျသှားတယျ။ ကိုယျတိုငျကွုံခဲ့တဲ့ ကာယကံရှငျတှအေပွောအရတော့ ဝငျပူးခံရတဲ့ကောငျမလေးက အရငျတုနျးကလို မဟုတျတော့ပဲ အသားအရညျ ဝငျးဝငျးဝါဝါနဲ့ မကျြနှာလညျး ဟိုးအရငျတုနျးကထကျ ပိုပွီးတော့ ကွညျကွညျလငျလငျဖွဈလာပါသတဲ့။ကိုယျတိုငျကွုံရခွငျးမဟုတျလို့ စီကာပတျကုံးမရေးတတျပမေယျ့ ဘိလပျပွညျ လနျဒနျက တကယျ့ အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ ကြေးဇူးရှငျမှေးသဖခငျရဲ့ကိုယျတှအေ့ကွောငျးအရာတှကေို နောကျတကွိမျမှာ ပွောပွဖို့ ကွိုးစားပါဦးမယျ။